Best Extreme Attractions In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Best Extreme Attractions In Europe
Hapana kuperevedza yokunyanyisa zvinokwezva mu Europe. Adrenaline vanotsvaka uye vanoda nemitambo yokunyanyisa anogona ruzivo siyana European dzokugara ane zvakasiyana-siyana zvinoitwa. Kana uri kushamisika sei kuti ikoko nechitima, isu iwe akafukidzwa, wo! Heano yedu pamusoro mapiki kuti yakanaka yokunyanyisa zvinokwezva mu Europe:
Best Extreme Attractions mu Europe – Innsbruck, Ositiriya
Nokuda zuva adrenaline-dzakawedzerwa, tarisa hapana kupfuura Innsbruck mu Ositiriya. Pane zvakawanda zvinhu zvokuita, kana uri kutsvaga runyararo kana mafaro. nepo vakawanda vashanyi kuenda Innsbruck chaiyo nokuda kwayo rine runyararo chitarisiko, rine zvakawanda chaizvo kupa. Unogona kuona bobsleigh kukwira panguva Olympiaworld, tora Bungee kusvetuka kure europabrücke kana kuenda Skiing. Nature iri mukare, uye maonero vari zvinoshamisa. Chero sarudza kuita pa Innsbruck, chimwe chinhu chiri chokwadi - hauzovipo kufinhikana. Uye iwe unogona kusvika nayo nyore nechitima. It chinobatanidza kune vamwe Austria nemamwe rakakura European njanji hubs.
Extreme Attractions muna Interlaken, Siwizarendi
Siwizarendi Varege nyika yokutanga unofunga kana nyaya ndiye Best Extreme Attractions mu Europe. zvisinei, kutanga kuonekwa zvechokwadi anogona kutsausa. Interlaken runoonekwa kuva mumwe mukuru hotspots kuti mitambo yokunyanyisa mu Europe. Chinhu chakanaka nharaunda akashongedzerwa zvakakwana kugutsa hwomoyo ane adrenaline kutsvaka. Vamwe mabasa muna Interlaken vari paragliding, Rafting, Bungee achisvetukasvetuka, uye Canyoning. Kusvika Switzerland ndizvo svikika nechitima, sezvo pane nzira dzokutengeserana kubva nyika dzakavakidzana uye maguta Europe.
Attractions pa Le Marché, Itari
Eastern Italy ari kunyanya kuzivikanwa kuti unyanzvi hwayo, tsika uye culinary nezvishamiso. Still, mukurumbira izvi hazvirevi kuti pane chimwezve chinhu ichi nharaunda yakanaka. Le Marché ndiyo inozivikanwa mumwe yakasiyana uye zvisingatarisirwi chikonzero. Inotarisira kukuru kana iwe kusvetukira kubva pane ndege pamusoro payo. skydivers ruzivo vanoziva izvi, asi Le Marché zvakare nzvimbo huru kuedza kunze Extreme Attractions mu Europe uye kunyanya skydiving kokutanga. Kana izvi zvinoita zvinofadza kwamuri, unogona kutora inofadza, yevedza chitima kuchovha kuburikidza Italy kuna Le Marché.
Florence kuna Macerata Zvitima
Florence kuna Jesi Zvitima
Rome kuna Ancone Zvitima
Rome kuna Pesaro Zvitima
Extreme pa Mont Blanc
Sezvo soro yepamusoro yose Europe, Mont Blanc agara kukwezvwa wayo wakanaka mugove nevashanyi. Kukwira gomo pamusoro pegomo hakusi kuziya komoyo, ndokusaka vashanyi kutsvaka mabayo rudo here kwazvo. Mont Blanc anopikira ushingi, kunoshamisa uye mukare girl, uye dzakunokonzera zvakaoma haana wose anogona kusangana. Hazvina zororo rakakwana isa vaya kutsvaka yokunyanyisa zvinokwezva mu Europe. Uye kana uri vasiri kumunetsawo kuti kukwira, unogona achiri kuona Mont Blanc kuburikidza paragliding. Nerumwe, ndinzwisise munhu rechando rimwe vazhinji kutungamirirwa treks kuti zvinofarirwa munzvimbo. Unogona kusvika taundi chamonix ne chitima uye kufamba kuna Mont Blanc mune Mont Blanc Express.
Uri kutsvaka adrenaline yakazara yako inotevera Extreme Attractions mu Europe?
Tarira mberi pane zvinokwezva izvi akanyanyisa. All yenzvimbo idzi nyore nechitima, All iwe kuita Book Tickets Your uye kuronga rwendo yako!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-extreme-attractions-in-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#kwekupedzisira #traveleurope ushingi europetravel Tranride Train Travel travelaustria travelswitzerland